Maalinta: Juun 20, 2018
Magaalada Ankara, EGO waxay bedeshay jidadka basaska 596, 598 iyo 598-1 iyadoo la tixgelinayo kobaca guryaha ee sii kordhaya iyo tirada dadka. Magaalada Ankara, EGO 596 waxay bedeshay jidadka basaska 598 iyo 598-1. cusub [More ...]
Kormeerka Kumbuyuutarka ee Diyarbakir
Dowladda Hoose ee Magaalada Diyarbakir, iyadoo la yimid bilaha xagaaga iyo kororka kuleylka hawada ayaa bilaabay inuu xakameeyo hawo qaboojinta gaadiidka dadweynaha. Nidaamka dembiga waxaa lagu dabaqi doonaa gaadiidka dadweynaha ee aan shaqeynin hawo qaboojinta. Dawlada Hoose ee Magaalada Diyarbakir, xagaaga [More ...]
Golaha Ankara ee Magaalada Ankara, afarta gees ee caasimada si loo hubiyo in si fudud oo aan kala go 'lahayn loo galo baabuurta gaadiidka dadweynaha ee gaarka loo leeyahay (ELV) si ay dib ugula soo baxaan hindisada. [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sameysay Terminalka Baska ee Magaalooyinka. Gaariga dhigashada gawaarida soo galaya Terminalka si sahal ah, waxaa lagu diyaariyey qeybta baarkinka. Meelaha gawaarida la dhigto waxaa loo kala saaray khadadka jaalaha ah. 11 kun oo mitir murabac [More ...]
Xarunta Jaamacadda ee Ya Departmentar Architecture Gudaha iyo ardayda Naqshadeynta Deegaanka ayaa dib u habeeyay xarunta tareenka ee Alsancak, oo leh taariikh sanadle ah 150, si magaalada loogu keeno meel cusub oo magaalada ah iyo meel fagaaro ah oo bulshada iyadoo dib loo soo nooleynaayo iyadoo la adeegsanayo howlo casri ah. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay ka dhigeysaa dhibcaha cufnaanta kala go'ida isgoysyada iskuxiran si loo yareeyo isu socodka magaalada. Isgoysyada ku mashquulsan laambada taraafikada waxaa lagu daadiyaa iyadoo midba mid loo abaabulayo. Wadooyinka isgoysyada [More ...]
Madaxweynaha IMM, Mevlüt Uysal, Princes Islands iyo shacabka ayaa heli doona xalal ay kula kulmaan macalinka, ayuu yiri. Uysal, “Dadka Jasiiradaha ah, waxay ku kalsoon yihiin arrintan: Waxaan xallin doonnaa gaadiidka. U oggolow tababarayaashu inay raaxaystaan. Si buuxda dhibbanayaasha laftooda [More ...]
Dhibaatada Gaadiidka ee Arnavutkoy 3 in la xaliyo Khadadka Jidka
Markii uu la kulmay muwaadiniinta iyo farshaxanada Arnavutköy, madaxweynaha MeBB Mevlüt Uysal wuxuu shaaca ka qaaday in dhibaatada gaadiid ee degmada lagu xallin doono xariijinta metrooyinka kala duwan ee 3 iyo basaska cusub. Uysal, “Maalgashi cusub, 3. Madaarka iyo Canal Istanbul [More ...]
Duqa magaalada Cankesen wuxuu booqday Station-ka TCDD ee Ankara
Can Cankesen, Gudoomiyaha Sarkaalka Gaadiidka-Sen, Mehmet Yıldırım, Madaxweyne kuxigeenka, Erkan Güler, Gudoomiyaha Laanta Ankara 1 iyo xubnaha guddiga laanta agaasimayaasha ayaa booqday xubnaheena iyo shaqaalaha xarunta TCDD Ankara Station. [More ...]
Wasiirka arimaha dibada: eri 37 kun iyo 140 Aircraft Expeditions inta lagu guda jiro Bakaylaha
Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ) oo ay diyaarisay Agaasinka Guud ee Bisha Ramadaan, oo ay kujirto Bandhigga 8-17 ee marinka hawada iyo tirakoobka rakaabka ayaa lagu dhawaaqay. Wasiirka [More ...]
BTS wuxuu ugu yeeraa saldhigga Ankara inuu yimaado!
Dhaqdhaqaaq ayaa lagu qabtay Hoteelka Ankara ee Capital Solidarity, kaas oo ay kujireen ururo badan oo aan dowli ahayn, oo hoos imaanayay hoggaanka Isutaga Shaqaalaha Gaadiidka iyo Rugta Dhismaha Laanta Ankara. Gaadiidka Midaysan [More ...]
Ayhan Ayvaz oo noqday Madax Ku-Xigeenka ah ee IETT
Gümüşhaneli Ayhan Ayvaz waxaa loo magacaabay inuu noqdo Ku Xigeenka Maareeyaha Guud ee Istanbul Electric Tramway iyo Hawlaha tunnel (IETT). Ayvaz oo ka socda tuulada Dölek kuna xidhan xarunta, waaxda maamulka basaska ee IETT [More ...]
Ankar Mank oo ku guuleystay 10 Mileage
Ankaray, oo horey loogu yiqiin Mamak Landfill ayaa loo fidin doonaa aagga. 5 waxaa loo qorsheeyay in la dhammaystiro sannad kasta Xarigga metro-ka cusub ee '300' wuxuu ka walaacsan yahay kun qof oo Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ku dhawaaqay Baaqa Doorashada ee Xisbiga Xisbiga AK. [More ...]
MOTAŞ wuxuu Tufenkaajiyay Tuffenkici Wasiirka Cuntada
Wasiirka Kastamka iyo Ganacsiga Bülent Tüfenkci, Gawaarida Malatya ee Gaadiidka Dadweynaha iyo Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha (MOTAS) ayaa yimid garaashka baska saacadihii hore ee wareegga koowaad oo quraac la wadaaga darawalada. Ayadoo aan loo eegin Waqti Dheer [More ...]